Beelo ku dagaalamay Gobolka Galgaduud oo heshiis gaaray - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Beelo ku dagaalamay Gobolka Galgaduud oo heshiis gaaray
Beelo ku dagaalamay Gobolka Galgaduud oo heshiis gaaray
Waxaa heshiis rasmi ah laga gaaray xiisad colaadeed oo u dhaxeysay laba beelood taas oo bilihii la soo dhaafay ka taagneyd deegaano ka tirsan Gobolka Galgaduud.
Beelahaan ayaa dilal la xiriira aanooyin qabiil waxaa ay isugu geysteen Deeganada Bangeele Iyo Xinjilab,hayeeshee ugu dambeyn Galabta heshiis la kala dhex-dhigay.
Munaasabad lagu heshiisiinayey beelaha ayaa waxaa ku sugnaa Waxgaradka labada Beelood iyo Taliyaha Ciidanka qeybta 21aad Cabdul Casiis Cabdulaahi Gooje iyo Taliyaha Ciidanka DANAB ee qeybta 21aad Muqtaar Cabdulle Xuseen,kuwaas oo qeyb ka ahaa waan waanta maleeshiyaadka dagaalamay.
Waxgaradka labada maleeshiyo Beeleed ayaa isla qaatay qodobo ay ku heshiiyeen,iyaga oo sheegay inay rajo ka qabaan in dagaalkooda uusan dib u soo laaban.
Taliyaha Ciidanka qeybta 21aad Cabdul Casiis Cabdulaahi Gooje ayaa ugu baaqay waxgaradka iyo maleeshiyaadka dagaalamay inay fuliyaan qodobada heshiiska si ay nabad ugu wada noolaadaan Bulshada ku nool deegaanada lagu dagaalamay.
Bulshada ku nool Deeganada Bangeele Iyo Xinjilab ayaa waxaa saameyn ku yeeshay dagaalada soo laab laabtay,kuwaas oo hoos u dhigey horumarkii.deegaanadaas.
Previous articleSiyaasiyiinta mucaaradka oo ku qul qulaya Xarumaha Wakiilada Caalamka ee Muqdisho
Next articleSAWIRO:-Soomaaliya oo dib u furtay machadkeeda diblomaasiyadda